Wafdi DJibouti ka socda oo tagay Hargeisa - BBC News Somali
Wafdi DJibouti ka socda oo tagay Hargeisa
Image caption Wasiirka warfaafinta, isgaarsiinta iyo dhaqanka
Wafdigii ugu balaadhnaa ee ka socda Jamhuuriyadda Jabuuti ee taga Somaliland ayaa u jooga Hargeysa ka qaybgalka xafladda dhaarta iyo xilwareejinta madaxweynaha la doortay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo Madaxweyne Daahir Rayaale ku wareejinaayo Xilka Talaadada.
Wafdigaasi, oo ka kooban 16 xubnood, waxay isugu jiraan wasiiro iyo xubno baarllamaanka Jabuuti ka tirsan iyo masuuliyiin kale.
Waxaa hogaaminaya wasiirka wasaaradda warfaafinta, isgaadhsiinta iyo dhaqanka ee Jabuuti, Cali Cabdi Faarax, waxaana ka mid ah guddoomiye ku xigeenka baarllamaanka Jabuuti, Xuseen Cumar Kawaaliye iyo Wasiirka wasaaradda istaageersiga qaranka Maxamed Cawaale. Wasiirka Warfaafinta , isgaadhsiinta iyo dhaqanka jabuuti , isla markaana ah afhayeenka dawladda ayaa BBC u sheegay in ujeedada socdaalkooda somaliland yahay ka qaybgalka xafladda lagu dhaarinaayo madaxweynaha la doortay , xilkana ay kula kala wareegayaan labada madaxweyne.
Wuxuu sheegay in ay hambalyo ka sidaan madaxweynaha jamhuuriyadaa Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, una gudbinayaan shacabka iyo madaxda Somaliland, isagoo sheegay in doorashadii Somaliland tusaale u tahay Afrika oo dhan sida nabadda iyo aqbalaadda leh ee xisbiyadii tartamaayay u qaateen natiijada.
Wafdiga, waxaa soo dhoweeyay wasiiro ka socda xukuumada Somaliland iyo madaxda xisbiga doorashada ku guuleystay ee Kulmiye.
Waxaa la kulmay maanta madaxwaynaha xilka ka sii degaya, Daahir Rayaale Kaahin iyo kan la doortay ee Somaliland, Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo.